कतारको छिमेक सम्बन्धमा नयाँ फड्को, कतारी अमिरमाथि जनताको अपार समर्थन « Khasokhas
प्रकाशित मिति : पुस २५, २०७७ शनिबार
साढे तीन वर्षअघि कतारी नागरिकहरु बिहान उठ्दा छिमेकी मुलुकहरुले कतारमाथि अनायास नाकाबन्दी लगाएको थाहा पाएर आश्चर्यचकित भएका थिए, र यसै साता फेरि उलटफेर भयो । त्यो नाकाबन्दी फेरि रातारात समाप्त गरियो ।
नाकाबन्दी आफैंमा निकै पिडादायी हुने गर्दछ र त्यसले छिमेकी मुलुकहरुबीच तनाबको वातावरण सिर्जना गर्नुृ अनौठो होइन । नाकाबन्दी खेपेका साढे तीन वर्ष तिक्ततापूर्ण रह्यो । कतार र यसका अरब छिमेकी मुलुकहरुबीच हिलो छ्यापाछाप भयो, संचार माध्यममा गालीगलौज छापिए, प्रशारण भए, सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाइए, अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधारका लागि निकै महँगो सौदाबाजी गरिए र ह्याक गरिएका र सूचना चुहावटका आरोप–प्रत्यारोप चले ।
कतारलाई बहिस्कार किन गरियो भनेर प्रश्न गरिए साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब ईमिरेट्स, बहराइन र इजिप्टमा त्यसलाई फौजदारी अपराध सरह मानियो । किनभने यी चार राष्ट्रले कतार विरुद्ध कठोर दण्ड दिने भन्दै कुटनीतिक र व्यापारिक समेत सबै किसिमबाट नाकाबन्दी गरेका थिए ।
“विदेश नीतिको सन्दर्भमा नाकाबन्दीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कतारले आफूलाई धेरै फेरबदल गर्नु परेको थिएन किनभने नाकाबन्दी गर्नुपर्ने कारणको जग नै निकै कमजोर थियो,” कतारस्थित नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीकी सहायक प्राध्यापक जोसलिन साज मिचेल बताउँछन् ।
उनको भनाईमा कतारलाई एक्ल्याउने चार राष्ट्रको अभियान असफल भएको थियो । अमेरिकामा बाइडेन प्रशासनले सत्ता सम्हालेपछिको परिदृश्यले पनि कतारलाई लाभ पुगेको मानिन्छ । बाइडेन प्रशासनले साउदी अरेबियामाथि कडा नीति अख्तियार गर्ने र इरानसँगको सम्बन्धमा पनि पुनरावलोकन गर्ने सम्भावना छ । “कतारका तर्फबाट कुनै नीतिगत परिवर्तन गरिहाल्ने अवस्था मैले देखेको छैन,” उनले भने, “दोहालाई वास्तवमै प्रयोग गरिएको छ, र मान्यता दिइएको छ ।”
सोमबार राति, साउदी अरेबियाले कतारमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ, र आफ्नो आकाश हवाई उडानका लागि खुला गरिएको छ । केही दिनभित्रै जमिनबाट पनि आवातजावत फुकुवा हुँदैछ । मंगलबार, खाडी क्षेत्रका नेताहरु र इजिप्टका प्रतिनिधिहरु साउदी अरेबियामा भेला भएका थिए । त्यस भेलामा सहभागी खाडी राष्ट्रका चारै सदस्यले कतारमाथि लागेका प्रतिबन्ध र नाकाबन्दी अन्त्यको घोषणा गरे ।
सबैभन्दा अनौठो त साउदी अरेबियाका राजकुमार मोहम्मद बिन सल्मानले साउदी अरेबियाको अल–उलामा आयोजित शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका कतारका सत्तासिन अमिरलाई अंगालो हालेर भव्य स्वागत गरेका सथिए । साउदी राजकुमारले अमिरलाई साउदी अरेबियाको ऐतिहासिक मरुभूमिमा घुमाउन लगेका थिए । कतारी अमिरले पनि आफू सवार जेटमा साउदी अरेबियाको एक भूपरिवेष्टित नजद क्षेत्रको नाम छापेर भातृत्व प्रदर्शन गरेका थिए ।
सन् २०१७ को मध्यमा संकट उत्पन्न हुँदा ३७ वर्ष पुग्नु भएका कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले त्यसबखत आफ्नो शासनकालमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्नु परेको थियो ।
कतारले पर्सियाली खाडी क्षेत्रमा नयाँ रणनीतिक महत्वको स्थानलाई प्रयोगमा ल्यायो । विश्वकै सर्वाधिक ठूलो तरल प्राकृतिक ग्यास उत्पादक राष्ट्र कतारले विश्वका प्रमुख शक्तिशाली मुलुकलाई निरन्तर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनेक्रमलाई निरन्तरता दियो । निर्माणका सामग्रीको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन वैकल्पिक बाटाहरु खोलिए जसबाट नयाँ राजमार्गहरु, होटल र विशाल रंगशालाहरुको निर्माण सुचारु हुन सक्यो ।
संकट व्यवस्थापनमा शेख तमिमको सुझबुझपूर्ण व्यवहारबाट उनको लोकप्रियता कतारमा अरु बढ्यो । उनका तस्वीरहरु ठुल्ठूला भवन र कारका झ्यालमा टाँगिए । कतारको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको एक कक्षमा राष्ट्रले सामना गर्नु परेको संकट व्यवस्थापन झल्काउने तस्वीरहरु राखिएका छन् ।
आर्थिक रुपमा, विश्वकै धनी राष्ट्रमा दरिएको कतारमाथि नाकाबन्दीले निकै ठूलो क्षति पुग्यो । कतार एयरवेज चार राष्ट्रले गरेको आकाश र बजार प्रतिबन्धले अर्बौं डलर नोक्सान भएको जनाएको छ । दबाबका बाबजूद कतारले स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको छवि कहिल्यै कमजोर हुन दिएन ।
“अहिले प्रतिबन्धहरु फुकुवा भइसकेको अवस्थामा कतारले आफ्ना केही नीतिहरुलाई नरम बनाउने तयारी गरेको छ, तर टर्कीसँगको सम्बन्ध तोड्ने सम्भावना छैन,” युरेसिया ग्रुपका मध्यपूर्व एवं उत्तर अफ्रिकी प्रमुख अहयाम कामेल बताउँछन् ।
कामेलको विचारमा कतारले मुस्लिम ब्रदरहूड संस्थालाई दिइआएको सहयोग निरन्तर जारी राख्नेछ, र यसले अरु खाडी राष्ट्रलाई चिढ्याउने छ ।
कतारले चार राष्ट्रको यी मागलाई अस्वीकार गरिसकेको छ । सिएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा एक जना वरिष्ट कतारी कूटनीतिज्ञ अन्वर गर्गासले मागको सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको स्पष्ट गरेका छन् । उनले अब गर्ने भनेकै विगतका तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा मल्हमपट्टी लगाउनु हो भने ।
बुधबार दोहास्थित अल जजिराका अंग्रेजी र अरेबिक पेज सहित कतारी समाचार वेबसाइटहरु युएईमा ब्लक गरिएका थिए । तर युएईका समाचार माध्यमहरुले कतारमाथि नरम दृष्टिकोण राख्न थालेको आभाष पाइएको छ । युएई र साउदी अरेबियाका अखबारका प्रथम पृष्ठमा खाडी राष्ट्रको शिखर सम्मेलनका तस्वीरहरु छापिनुका साथै सकारात्मक समाचार शीर्षक राखिएका छन् । एपी
शुक्रबार अध्यागमनबारेका ३ कार्यकारी आदेश जारी गरिने: शरणार्थी, पब्लिक चार्ज र परिवार पुनर्मिलन
हरेक दिन कार्यकारी आदेश जारी गर्दै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अध्यागमनका लागि आगामी शुक्रबार
पुरानो सोसल सेक्युरिटी कार्ड च्यातियो वा नष्ट भयो ? नयाँ कार्ड अनलाइनबाटै निशुल्क
तपाईको सोसल सेक्युरिटी कार्ड च्यातियो वा नष्ट भयो ? तपाईले नयाँ कार्ड अनलाइनबाटै निशुल्क आवेदन
Secretary of State Antony Blinken’s first day in pictures
Secretary of State Antony Blinken arrives at the U.S. Department of State foraWelcome
सन् २०२० मा जन्मिएको बच्चाका लागि राहत चेकको ११ सय डलर प्राप्त हुने
तपाईको सन् २०२० मा बच्चा जन्मिएको छ? यदि छ भने तपाईको परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन
ट्याक्स फाइल गर्दा यसरी प्राप्त गर्नुहोस् तपाईले नपाएको राहत चेक
वासिंटन डिसीलाई ५१ औं राज्य बनाउन संसदमा बिल
रिपब्लिकनले नमाने ५१ भोटबाटै बजेट प्रकृयामार्फत राहत चेकसहितको प्याकेज पारित गरिने
अमेरिकामा अब बालबालिकाहरुका लागि अनलाइनबाटै निशुल्क नेपाली भाषाकक्षा